Search Engine Optimization: Mora sa Sarotra? | Martech Zone
Search Engine Optimization: Mora sa Sarotra?
Alatsinainy Martsa 30, 2009 Asabotsy, Jona 16, 2018 Douglas Karr
Misy fampahalalana iray taonina avy amin'ny tranonkala momba ny fomba hanatsarana ny tranokala. Mampalahelo fa 99.9% amin'ireo tranonkala no mbola tsy misy fanatsarana rehetra. Tsy manasokajy ny tenako ho manam-pahaizana momba ny SEO aho, na dia mino aza aho fa manana fahatakarana tsara ireo singa tafiditra amin'ny 'fanalana ny karipetra mena' ho an'ny motera fikarohana.
Rehefa mangataka torohevitra ny namako dia omeko azy ireo ny fotokevitra fototra:
Hisoratra anarana amin'ny tranokalanao Google Search Console hahazoana antoka fa voatanisa izany ary tsy manana olana. Ity dia hanasongadinana ireo fanatsarana tokony hataonao - toy ny fampiasana ny sitemaps sy ny rakitra robots.
Research fehezanteny fototra ampiasain'ny mpikaroka hitady vokatra sy serivisy omenao. Ohatra iray ny namana iray izay mitantana orinasa fandefasan-kafatra mandefa hafatra… saingy tsy nanana ilay voambolana finday-barotra ao amin'ny atin'ny tranokalany. Tsy maningana izany - fahita mahazatra!
Fahatakarana ny toerana hampiasana teny lakile… avy amin'ny anaran'ny domain, URL or mandefa slug, lohatenin'ny pejy, tag h1, lohateny ambany, lahatsoratra matevina, sns. ary koa ny fiantohana ireo teny lakile ampiasaina imbetsaka ao anatin'ny atiny.
Ny fahafantarana fa ny rohy manan-katao mahery miverina amin'ny tranokalanao dia hampitombo ny laharan'ny tranokalanao amin'ireo teny lakile ireo. Ny paikady backlink lehibe dia mety mandray anjara amin'ny resaka sy hevitra amin'ny bilaogy indostrialy hafa.
Angamba ny singa manan-danja indrindra dia fanoratana atiny lehibe fotsiny ary soraty tsara. Tsy afaka mandresy raffle ianao raha tsy mividy tapakila. Toy izany koa ny motera fikarohana - tsy afaka milahatra amin'ny valin'ny motera fikarohana ianao raha tsy misy atiny mifandraika amin'ny karoka. Mividiana tapakila bebe kokoa ary hitombo be ny vintana mety hahitanao azy. Tsotra kely io matematika io.
Indostria sy teny lakile sasany dia mifaninana ka mampifaninana azy mila tokoa fampiasam-bola be dia be - amin'ny paikady, fotoana, atiny ary paikady backlinking. Raha mila tinkering lalindalina kokoa ianao dia mamporisika anao hiditra ao Moz. Farafaharatsiny, vakio hatramin'ny farany an'i Moz's Faktoran'ny laharana Search Engine mba hahafantaranao tsara ny fiantraikan'ny singa pejin-pejy tsotra eo amin'ny laharan'ny motera fikarohana anao. Mbola misy hafa koa Lahatsoratra SEO any koa!
AT&T: Ny manaraka AIG?
Mitombo ny fikarohana eo an-toerana, eo amin'ny sarintany ve ianao?
Mar 31, 2009 amin'ny 12: 21 AM
Soso-kevitra mafy orina. Hitako fa tena misavoritaka ny SEO ary mahasosotra ahy izany satria fantatro ny maha-zava-dehibe azy. Mianatra tsikelikely aho ary mihatsara kokoa. Saingy ny zavatra iray hitako dia na dia fantatro aza fa ny SEO amin'ny ankapobeny dia mety ho ratsy be ny famoahana votoaty manampy be dia be.
Manorata matetika ary ampiasao ny teny fanalahidy. Mila fotoana izany fa tsara ho an'ny google.
Apr 1, 2009 amin'ny 2: 56 AM
Heveriko fa nandrakotra ireo lohahevitra lehibe rehetra tokony hodinihina amin'ny SEO ianao. Betsaka ny orinasa ary ny manam-pahaizana SEO dia mbola tsy manana hevitra momba ity lohahevitra ity. Manoro hevitra aho amin'ny fampiasana google adwords external keyword tool amin'ny fisafidianana teny fanalahidy mety.
Apr 1, 2009 ao amin'ny 4: PM PM
Sarotra ny Seo, na izany aza raha ara-dalàna ny tranokalanao ary mieritreritra ny maha-zava-dehibe azy ianao dia tena miasa tokoa izany. Zava-dehibe ihany koa ny mahita (amin'ny alàlan'ny stats na fitaovana google wemaster) izay teny tena tadiavin'ny olona. Gaga aho amin'ny teny verbose ataon'ny sasany amin'ny fikarohana ataony.
Ny fijerena fikarohana mba hanesorana sy hanafoanana ireo zavatra mitondra olona ho any amin'ny tranokalanao izay tsy mila eo dia fomba tsara hampitomboana ny maha-zava-dehibe anao koa…
Ny fametrahana ny hevitrao amin'ny bilaogy tahaka ity dia fomba tsara ihany koa!
Jun 28, 2011 ao amin'ny 7: 33 PM
RAHA manontany an'io aloha ianao dia ho faly aho hamaly azy eny fa izao dia tsy noho ny fitaovana google maro manivana ny rohin'ny tranonkala rehetra izay hita ao amin'ny motera fikarohana ary koa noho ny fanavaozana ny google. Lasa henjana ny SEO ankehitriny ka mahatonga ny manam-pahaizana SEO ho lasa mahay sy mamitaka kokoa, vokatra tsara ihany koa izany.